IBhayibhile​—Ichane Kwinto Yonke
NANGONA iBhayibhile ingeyoncwadi yesayensi, isoloko ichanile xa ichaza indalo. Khawuve xa ithetha ngemozulu nemfuza.
IMOZULU—INDLELA EYENZEKA NGAYO IMVULA
IBhayibhile ithi: “[UThixo] uwatsala anyuke amathontsi amanzi; ahluzeka njengemvula ukwenzela inkungu yakhe; ukuze amafu athontsize.”—Yobhi 36:27, 28.
IBhayibhile apha ichaza indlela eyenzeka ngayo imvula. Ubushushu belanga obudalwe nguThixo ‘butsala amathontsi amanzi anyuke’ ngokuwenza abe (1) ngumphunga. Lo mphunga uthi wakufika esibhakabhakeni (2) ube ngamafu abangela imvula okanye (3) isichotho nekhephu. Abantu abafunde ngemozulu, abakayazi ncam nangoku eyona ndlela yenzeka ngayo imvula. Eyona nto ibangela umdla ngumbuzo weBhayibhile othi: “Ngubani onokuziqonda iingcamba zamafu?” (Yobhi 36:29) UMdali yena uyazi kakuhle indlela eyenzeka ngayo imvula, ibe waqiniseka ukuba omnye wabantu awabaphefumlelayo uyabhala ngayo eBhayibhileni. Yabhalwa kwakudala ngaphambi kokuba oososayensi bayichaze.
IMFUZA—INDLELA EKHULA NGAYO IMVEKU ENGEKAZALWA
UKumkani uDavide naye owabhala iBhayibhile wathi kuThixo: “Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, yaye zonke iinxalenye zam zazibhalwe phantsi encwadini yakho.” (INdumiso 139:16) Ngokungathi uyabonga, uDavide uthetha ngemveku engekazalwa ikhula kanye ngendlela ebhalwe “encwadini” eyayikho okanye ngendlela ecetywe ngayo. Into emangalisayo kukuba, le nto yabhalwa kwiminyaka emalunga neyi-3 000 eyadlulayo!
Kodwa le nto yaqondwa okokuqala ngabantu phakathi kwiminyaka yoo-1800, xa isazinzulu ngezityalo saseAustria, uGregor Mendel waba ngowokuqala ukuba nofifi ngendlela esebenza ngayo imfuza. Bona abaphandi bakwazi kuphela ngoAprili 2003 ukuzilandelelanisa zonke iinkcukacha zeseli. Oososayensi bafanisa indlela ezigcinwa ngayo ezi nkcukacha nesichazi-magama esigcwele ngamagama abunjwa ngoonobumba. Kula magama kugcinwa imiyalelo yemfuza. Ngenxa yale miyalelo, amalungu emveku engekazalwa afana nengqondo, intliziyo, imiphunga, imilenze neengalo akhula ngokulandelelana nangexesha elifanelekileyo. Yiloo nto oososayensi befanisa yonke le nto “nencwadi yobomi.” Umbhali weBhayibhile uDavide wayazi njani indlela echane kangaka ebumbeka ngayo imveku? Ngokuthobeka uthi: “Ngumoya kaYehova owathethayo ngam, nelizwi lakhe laliselulwimini lwam.” *—2 Samuweli 23:2.
Izinto Ezithethileyo Ziyenzeka
KUNZIMA kakhulu, ukuba kuyenzeka kwaukwenzeka, ukuqiniseka ukuba ngubani oza kuphatha ilizwe kwixa elizayo, ibe yintoni aza kuyenza xa ephethe nokuba yintoni engamyekisa ukuphatha. Kunjalo ke nangeedolophu. Akakho umntu onokwazi ukuba idolophu ethile iza kutshatyalaliswa nini, ngubani. Kodwa yona iBhayibhile yaprofeta ngokutshatyalaliswa kwabalawuli abanamandla needolophu zabo, futhi ichaza ixesha nendlela okwakuza kwenzeka ngayo oku. Nantsi imizekelo emibini.
IBhabhiloni yakudala yayibubukhosi obunamandla obabunefuthe elikhulu kwintshona yeAsiya kangangamakhulu eminyaka. Yakha yayeyona dolophu inkulu ehlabathini. UThixo waphefumlela umbhali weBhayibhile uIsaya ukuba aprofete athi iBhabhiloni yayiza kutshatyalaliswa nguKoreshi, emva koko kungaphindi kubekho mntu uhlala kuyo. Oko kwaprofetwa kwiminyaka eyi-200 ngaphambi kokuba kwenzeke. (Isaya 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Ngaba yenzeka nyhani le nto?
Ngobusuku nje obunye, ngo-Oktobha 539 B.C.E., iBhabhiloni yoyiswa nguKoreshi Omkhulu. Ekuhambeni kwexesha, imijelo eyayikade inkcenkceshela umhlaba owawuchumile waseBhabhiloni yoma kuba yayingasahoywanga. Ngonyaka ka-200 C.E., loo mhlaba wawungasenamntu uhlala kuwo. Nanamhlanj’ oku, iBhabhiloni isengamabhodlo. Kanye njengokuba iBhayibhile yaprofetayo, iBhabhiloni “yaphanza ngokupheleleyo.”—Yeremiya 50:13.
Lo mbhali weBhayibhile wakwazi njani ukuzibona ngaphambi kokuba zenzeke ezi zinto? IBhayibhile ithi esi ‘yayisisibhengezo nxamnye neBhabhiloni awasibonayo uIsaya unyana ka-Amotsi embonweni.’—Isaya 13:1.
INineve, ikomkhulu loBukhosi BaseAsiriya, yayisaziwa ngezakhiwo ezakha zazihle ngeyona ndlela. Yayinezitrato ezikhulu, iigadi zikawonke-wonke, iitempile namapomakazi ezindlu zasebukhosini. Nakuba kunjalo, umprofeti uZefaniya waprofeta esithi le dolophu inkulu yayiza ‘kuphanza, ibe ngummandla ongumqwebedu njengentlango.’—Zefaniya 2:13-15.
INineve yatshatyalaliswa ngumkhosi waseBhabhiloni nowamaMedi ngenkulungwane yesixhenxe Ngaphambi Kwexesha LikaKristu. Enye incwadi ithi, le dolophu “kwathi cwaka ngayo kangangeminyaka eyi-2 500.” Kangangexesha elithile, abantu babengasaqinisekanga nokuba yakha yakho idolophu ekuthiwa yiNineve! Kuphakathi kwiminyaka yoo-1800 apho abembi bezinto zakudala bemba amabhodlo eNineve. Sithethanje, loo mhlaba yayakhiwe kuwo iNineve wonakele, nto leyo ebangele ukuba iGlobal Heritage Fund yenze esi silumkiso: “Izinto ezasala ngoxa kwakutshatyalaliswa iNineve zisenokuphinda zingabonakali ngonaphakade.”
UZefaniya wazazi njani ezi zinto? Uthi ‘ilizwi likaYehova lafika kuye.’—Zefaniya 1:1.
IBhayibhile Iphendula Eyona Mibuzo Ibalulekileyo Ngobomi
IBHAYIBHILE isinika iimpendulo ezanelisayo zeyona mibuzo ibalulekileyo ngobomi. Khawucinge ngale mizekelo.
KUTHENI KUSENZEKA IZINTO EZIMBI NEZIBUHLUNGU KANGAKA APHA EMHLABENI?
IBhayibhile ithetha kakhulu ngobubi nezinto ezibuhlungu ezenzekayo. Ithi:
‘Xa umntu elawula umntu iba kukwenzakala kwakhe’—INtshumayeli 8:9.
Abalawuli abangabantu abangafanelekanga nabarhwaphilizayo babazisele intlungu engathethekiyo abantu abaninzi.
“Bonke behlelwa lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.”—INtshumayeli 9:11.
zinto ezingenakubonwa kwangaphambili, njengokugula, iingozi, okanye iintlekele zingafikela nabani, nanini na noba uphi.
“Isono sangena ngamntu mnye ehlabathini nokufa ngaso isono.” —Roma 5:12.
Xa kwakudalwa indoda nomfazi bokuqala, ukufa kwakungekho ibe babefezekile. Isono ‘sangena ehlabathini’ xa bamona ngabom uMdali wabo.
IBhayibhile ayipheleli nje ekuchazeni isizathu sokuba abantu besehlelwa zizinto ezimbi. Isithembisa nokuba uThixo uza kubuphelisa buthi tu ububi emhlabeni aze ‘azosule zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona.’—ISityhilelo 21:3, 4.
KWENZEKA NTONI KUTHI XA SIFILE?
IBhayibhile iyenza icace into yokuba xa sifile akukho nto siyicingayo, akukho kwanto sikwaziyo ukuyenza. INtshumayeli 9:5 ithi: “Abaphilayo bayazi ukuba baya kufa; kodwa abafileyo, abazi nto konke konke.” Xa sifile, “ziyatshabalala iingcamango” zethu. (INdumiso 146:4) Ngoko, yonke imisebenzi yengqondo, njengokusebenza kwezivamvo, iyaphela. Yiloo nto singakwazi ukwenza nto, singeva ibe singakwazi nokucinga oku.
IBhayibhile ayipheleli nje ekusixeleleni ngento eyenzekayo kuthi xa sifile. Ikwasinika nethemba elivuyisayo lokuba abantu baza kuvuswa kobu buthongo bunzulu, ukufa.—Hoseya 13:14; Yohane 11:11-14.
YINTONI EYONA NJONGO YOBOMI?
IBhayibhile isichazela ukuba uYehova uThixo wadala indoda nomfazi. (Genesis 1:27) Umntu wokuqala uAdam, kuthwa ‘ungunyana kaThixo.’ (Luka 3:38) UThixo wadala abantu ukuze babe nobuhlobo naye, bonwabe baze baphile ubomi obanelisayo ngonaphakade apha emhlabeni. Ngenxa yoko, sidalwe sanomqweno wokumnqula, nguwo lo usenza sifune ukumazi ngakumbi. Yiyo le nto iBhayibhile isithi: “Banoyolo abo bayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya.”—Mateyu 5:3.
Nantsi enye into ethethwa yiBhayibhile: “Banoyolo abo balivayo ilizwi likaThixo baze baligcine!” (Luka 11:28) IBhayibhile ayipheleli nje ekusifundiseni ngoThixo, kodwa isinceda sonwabe ebomini yaye isinika ithemba lekamva.
UMbhali OnguThixo Nawe
EMVA kobungqina obuninzi, izigidi zabantu ehlabathini lonke ziyavuma ukuba iBhayibhile asiyoncwadi njee yakudala. Ziye zaqiniseka ukuba iliLizwi Eliphefumlelwe nguThixo, yindlela athetha ngayo nabantu, nditsho nawe siqu. Inesimemo esivela kuye sokuba umazi ngakumbi nize nibe ngabahlobo. IBhayibhile isithembisa ukuba xa ‘sisondela kuThixo naye uya kusondela kuthi.’—Yakobi 4:8.
Ukufundisisa iBhayibhile kusenza sibe nolwazi oluvuyisayo. Ulwazi lwantoni? Njengaxa ukufunda incwadi kukwenza ube nolwazana ngendlela acinga ngayo umbhali wayo, nathi ke xa sifunda iBhayibhile sitsho siyazi indlela acinga naziva ngayo uMbhali wayo, uThixo. Cinga ukuba ithetha ntoni loo nto kuwe. Utsho wazi iingcinga zoMdali wakho neyona ndlela avakalelwa ngayo! Nazi ezinye izinto esichazela zona iBhayibhile:
Igama likaThixo, ubuntu neempawu zakhe ezimangalisayo.
Injongo anayo ngabantu.
Nendlela anokuba ngumhlobo wakho ngayo.
Awunamdla wokufunda okungakumbi? AmaNgqina kaYehova angakuvuyela ukukunceda. Angakufundisa iBhayibhile ungakhuphanga nesenti le emdaka. Le nto iza kukunceda usondele nangakumbi kuMbhali weBhayibhile, uYehova uThixo.
Eli nqaku liye lahlolisisa obunye ubungqina bokuba iBhayibhile yincwadi ephefumlelweyo. Ukuze ufunde okungakumbi, funda isahluko 2 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova, iyafumaneka naku-www.jw.org/xh okanye uskene le khowudi
Ungabukela nevidiyo ethi Ngubani Umbhali WeBhayibhile? efumaneka ku-www.jw.org/xh
Jonga phantsi komxholo othi IIMPAPASHO > IIVIDIYO
^ isiqe. 10 EBhayibhileni, uThixo ubizwa ngegama lakhe uYehova.—INdumiso 83:18.
Kubomi bakhe bonke uYesu wayeshumayela ‘iindaba ezilungileyo zobukumkani.’ Ngaba wayeza kufa nezi ndaba?